Mogadishu Journal » 2018 » January » 10
Mjournal :- Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay ergayga Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somalia, Danjire Michael Keating oo safar shaqo ku jooga Somaliland. Kulankan oo ka dhacay Madaxtooyada Somaliland ayaa waxaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Puntland Cabdi weli Maxamed Cali Gaas ayaa si wadajir u dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xiri doonta Dangoronyo iyo degmada Eyl ee Gobalka Nugaal. Wadadan laamiga ah ayaa...
Cabdwali Gaas oo ka hadlay dagaalka Tukaraq
Mjournal :-Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay weerarka ay ciidamada Somaliland ku soo qaadeen deegaanka Tukaraq. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Maamulka Somaliland ay weerarkaasi ku soo beegeen...
Mjournal ::-Dawladda Federaalka Soomaaliya oo ka walaacsan collaadaha ka soo aloosmay deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, ayaa ku baaqaysa in dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Tukaraq ay si deg deg ah oo shuruud la’aan ah u joojiyaan dagaalka. Qorshaha Dawladda Federaalka ayaa...
Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda gobolka Karkaar
Mjourrnal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay oo Arbaco ah ku wajahan magaalada Qordho oo ka tirsan Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa oo booqasho ku maraya qeybo ka mid ah...